Afaan Habasha dubacha, Habasha waliin ciisaa, Habasha waliin jilibeenfachaa Bilisummaaf qabsofna jeechun of gowomsudha.
Oromoo abbaa biyyuma Oromoof Bilisummaa Oromoof qabsoo yerro dheeraf deemsisa jira. Qabsoota heeduu itti waregamani, maatiin heedun jijiruuf jirenya isaa itti dhabee jira. Cicicha qabsoo kanaaf qabuun biyya isaa keessati akka lamii lamafaatii ilalamee gidiraa kana hin jeedhamneetuu irra ga’aa jira. Baratoon Oromoo sanyiin qoodaman univesity hunda keessati dararama gudda utuu irra ga’uu bilisummaa Oromoof jeedhan diina waliin kookee wal qabani jiru. Seena adunya kana hunda dhiifnee bubee bubifameen kayoo wagga 120 ittin qabsoofne dhifnee diina jala shubsuu maltuu fidee? Gaafi ummataa Oromoo cicichaa qabsa’oota murni nama 10ti lakkawamuu jijiruu ni danda’aa?. Madi Kayyoo ganuu kun esaa madee? Qabsa’oon Bilisummaa Saboonumaafi Oromumma dhisan Amanta jala adeemuun maliif? Dhaabilee Oromoo Dabalee isiin gamagamuu qabuu.
Oromoo hanga amatii qabsoo kan gegesa jiru, diini koo na gargara jeedhee miti. Biyya adunya keessati ummani gabroomee garboonfata isaan hariroo umatee bilisoomee hin jiru. Russian milioona heedun ummata murassa Tatatra Mangol (Mangolia) jala kan bilisoomee, ummani India garbumma wagga 500 booda UK irraa kan bilisomee araran ykn wal galteen garboonfata waliin goodhen miti. Warii Israel murni murassi biyaa baqa irra deebeyan yerro mursa keessati lafa murasa qabatan lafa Palastiinota hunda kan dhunfatan, Araboota hunda injjifatan adunya irrati kan sodatama diina isaani waliin wal galani utuu hin tanee cimmana fi muranon lola hadha’aa adeemsisanti. Oromoon miliyoon 50 Tigre Milliona 5 jeecha sababa 100 dhiyeesun diina birroti hirkachuun bu’aa isaa irra bala isaatuu caalaa. Rakko himachuu qofaa malee qabsoon rakko keessa ba’uuf murannoo dhabuun diina keenya wagga dheerati heerumun isaan salphina.
Bara 2008 kasse dhaabbilee Oromoo diiguuf qamoon gosan wal gurmeesssan, sababa adda adda dhiyeesun kan moraa qabsoo Oromoo diigan erga mata isaa of keessa qaba. Namoon kun heedun isaan wara qabsoof mana ba’aan utuu hin tanee wara feedhii isaanf kara irra qabsooti dabalaman gaafa qabsoon lafatuu, kara gababan feedhi angoo qaban bakkan ga’aachuuf mora qabsoo diggan, dhaabaa horma jala galuu filatan. Diin dadabdoota kan argatee amoo hawwassa bitifamee kana of jala olchuuf jeedhan duran dursee kara jara kana waldalee amanta to’achuuf karoora isaa dura bafatee. Haluma kana Walda Musilima Oromoo gargarii qoqoduun walda Musilima Ethiopia jala hirirsun, Musilimuman Obboladha jeechuun Obbolummaa Oromummaa dhabamsisuu egalee. Waldalee Kiristana Oromoo qubeen hin kadhatiina waan hundi keenya wal galuun kandhan jeedhuun walda Kiristantoota Oromoo dadhabsisuun akka waan mana waqa dhaqani dhufan jara 21 keessa Oromoon isaan jala akka jilbeenfatanf gugufan goocha jiru. Kun Oromoo Genata Mana waqayoo galchuuf utuu hin tan’iin Oromummaa diigan kiyoo Habasha jala galchuuf.
Habashan kaleessa Oromoo harma muree harka muree amanta Oromoo baleesee, afaan fi adda Oromoo dhabamsisee hara amoo Oromoo mama waqaa galchuufn isiin kadhadha yamuu jeedhuu Oromoo kana walalee Habasha jala gugufuu ani Oromoodha jeechuuf iyuu hamilee hin qabuu, keessatu qabsa’oota fi dabalee dhaabbilee Oromoo ta’aan wangeelaa fi qurana batani Habasha jala adeemuun ummataa Oromoo qaneesudha. Oromoo lamii isaa ati Shawwa, Arsi, Boran, hararge, walega jeedhe waliin mariiachuu kan hin feene, Habashoota Musilma ykn Kiristani amoo Obboleessa koo jeedhe yerro jala adeemuu biyya ala kanati waan rajji arga jira. Biyya keessati ilee Oromoo diina jala ta’ee enyuuma isaaf falmatuu, ini biyya demokratawaa keessa jiratuu, utuu namii isaa hin dirqisisin dirqama Habasha fudhatee lamii isaan bilisummaaf qabsa’uun warii kun waraa biyya kutuu jeedhe waltajiti labsaa jiruu. Tajajiltoota fi gorsitota diina ta’uun Media fi waldalee Habasha gabissa jiruu. Kun amoo ummataa irra dhalatan sana ganuu qoofa utuu hin tanee waqaa Afaan Oromoo isaan humee ilee ganan afaan isaan dhisaan afaan horman waqaa kadhachuun waqaa gananii jiru.
Namoon Hara Wangeela fi Quranaa batani Habsha jala deeman, Bilisummaa Oromoo tobanee jeedhan labsaan kun waraa dheengadaa Obboo Galassa Dilboo, Abiyuu Gelata, Ibsaa Gutama, Huseen Ahima wajjira Oromoo keessa dhibbani bassan wara kaleessa nu ji’aa 6 keessati Oromoo bilisaa bafana jeedhantuu amoo Demokrasi yoo Ginbot 7 nu latee qabsoo ni tobana ummataa Oromoo isiin dukka hirirsina jeechaa jiru. Ummani Oromoo ykn gosi Oromoo kami iyuu gantoota qabsoo ummataa Oromoo harka diinati kuufsuuf folatuu of keessa rukutuu qaba. Qabsa’oon Oromoo uni musilama fi kiristan miti uni qabsa’oota Oromooti jeedhan utuu wal hin qoodiin wal dukka harka shiftoota somalee keessat wara wareegaman diigi isaan iyee ganotta kan iffa basee jira.
Dabbalee Dhaabbilee Oromoo heedun Bilisummaaf Qabsoofna jeecha, Mazgida Habasha fi Walada Kiristiyana Habashati waqeefacha diina jala kan jilbeenftan Oromuummaa fi saboonumaan isaan keessati kan hin gudataiin ta’uu agarsisa. Habashoon mata isaani irrati kadhachuun, samuun isaan adoodee jira. Qabsa’aan Oromoo Bilisa basuuf qabsa’uu tokko sanbata sanbata ykn Jimata Afaan Habashan, walda Habasha keessa jilbeenfata yoo ta’ee Oromoof qabsa’uun isaa soba. Qabsa’aan/tun Oromoo tokko Oromoo Bilsomsufn qabsa’aa jeecha habashati kan hirumtuu ykn kan fudhuu yoo ta’ee kun qabsa’aa miti. Dhaabilee Oromoo Miseensoota fi dabaloota hidhannoo siyyasaa cimmaa hin qabneen ijaraman kan jeenuuf kanaaf.
Melese Zenawi Alhabashi Musilim jeedhe Ijarun Musilm Hadha mana isaa torban tokkof nama birrafi keene torbe booda Haalaa jeedhe akka deefatuu kan goodhu amanta soba humee itti fe’uun jeequmsa Musilima kan kaseef ergama adda qaba. Ergami kun Qabsoo bilisummaa sababa fi sablamee keesumaa Uumati mirga isaanf qabsa’aan akka Oromoo fi Somalia qabsoo miriga dhisani akka qabsoo Amanta goodhanfi, kun ta’ee jira. Qabasa’oon Oromoo heedun ama qabsoo Bilisumaa dhisani Qabsoo amanta dukka hiriran jiru. Kayoon Melese kana ture. Ergasi Booda wari Tigray Kara Aabba Phu’los fi Melese Zenawi bakka bu’aa Kirsityana yamuu ta’aan Oromoo fi Somalen amoo bakka bu’oota Musilima ta’aan USA fi Israealn balalefatama akka jiratan goochuuf karorfamee jeequmsa uumamee dha.
Kayyoo keenya gaadii dhifnee kiiyoo hormi nu qoopheesa jiru keessa galuun dogogora gudaa Haqa saba keenyaf falmachuu dhifnee diina jala deemnee lamii keenya ija lafa ilachisuun ummataa gudaa kana salphisuu irra of qusachuu qabna. Oromoon Abba Gaanfa Afrika ta’ee utuu jiru, Abbuma kana diina keenee diina irra demokirasii kadhachuu yaalun kayyoo ummataa keenya ganuuti deemama jira. Yerro Oromoon oganaa cimma dhabee gara itti goruu walalee kara laman giduu dhabatuu caliisan ilaluun diina tumsuu waliin wal qixeedha. Ummani Oromoo gadii deebiyee yerro lagan wal qoodee amantan wal qooqoodee diina jala hiriruu kara qabsoo haqati deebsuu dirqama keenya.
Tarsimoo diin itti nu diiguuf bafatee wagoota darban kasse nu irrati gegessa jiru qabataman beeknu keessa ini guddan Oromoo Oromuummaa isaa dhisee gara amantati akka dacha’uu goochuu ture, wari tarsimoo kana basan gaafa Dargiin kufee daabalee fi oganno gurgudan dargii dabalatee mazijida fi walda kirsityanati galuu isaa caqasuun Tamirat Linnee gaafa ari’amuu waqaa fudhachuu isaa caqasuun dhabbalee Oromoo fi hawwasa Oromoo wal diige jiru kan uttun deebiyee hin itttin walda musilma fi kirsiyana Ethiopia jalatii dadafiin akka amataman goodha kan jeedhuu ture. Kun hoji irra ola akka jiru Oromoon fi dhaableen Oromoo ni beekuu, hidhannoon siyyassa fi sabonuman keenya wagga tokko keessati baqee dhumuun kun hidhannoon siyyassa fi hubannon Oromummaa nu qabnuu lafaa ta’uu mulisaa. Ummani (Dargagoon) Oromoo ole utuu hin buliin irrati mariiatee murteefachuu qaba. Dargagoon Oromoo Ilaalcha fi hidhata Habasha irraa bilisoomuu qabu yamuus Bilisoomna!!!